बार्सिलोनाको सबैभन्दा खराव दिन, रोकियो कीर्तिमान » खबरहरुको एउटै केन्द्र
सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ ११:५१ मा प्रकाशित !
काठमाडौं, ३१ बैशाख । स्पेनिस फुटबल लिग क्लव बार्सिलोनाले आइतबार रातिको खेलमा कमजोर प्रदर्शन गर्दा कीर्तिमान रोकिएको छ । जारी लिगमा एक खेलमात्र खेल्न बाँकी रहँदा बार्सिलोना लेभान्तेसंग ५–४ ले पराजित हुँदा बार्सिलोनाको सिजनमै अपराजित रहने कीर्तिमान रोकिएको हो ।
३६ खेलसम्म अपराजित बार्सिलोना ३७ औं खेलमा पराजित हुँदा आफ्नो कीर्तिमान लम्ब्याउन सकेन । लेभान्तेको मैदानमा भएको खेलमा लेभान्तेलाई जिताउन इमानुएल बोटेङले ह्याट्रिक गरे । बार्धीले २ गोल गरे । बार्सिलोनाका लागि फिलिप्पे कौटिन्होले ह्याट्रिक गरे भने लुइस सुवारेजले १ गोल थपे । खेलमा निकै विवाद भयो । दुवै टिमबाट आधा दर्जन आधा दर्जन पहेंलो कार्ड देखाइएको थियो ।
यो खेलपछि उपाधी जितिसकेको बार्सिलोनाको ३७ खेलबाट ९० अंक छ । १५ औं स्थानमा रहेको लेभान्तेको ४६ अंक छ । दोस्रो स्थानका लागि अन्तिम खेल नै निर्णायक हुने भएको छ । एथलेटिको मड्रिडको ७८ र रियाल मड्रिडको ७५ अंक छ । गोल अन्तर रियालको बढी छ ।
PREVIOUS POST Previous post: यस्तो छ नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको आजको विनिमय दर
NEXT POST Next post: दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अभिव्यक्ति प्रति सत्तारुढ दलको आपत्ति
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ ११:५१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ ११:५१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ ११:५१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ ११:५१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ ११:५१